Nezvedu - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co, Ltd.
Silicone Sealing Washer uye Gasket
Silicone Inodzivirira Sleeve
Inoitisa Silicone Zvigadzirwa
Yakakundwa Zvigadzirwa zveSilicone
Kudzoka Adhesive Silicone Zvigadzirwa
Silicone Chishongedzo cheMagetsi neMagetsi Zvigadzirwa
Silicone Zvikamu zveMhepo Mapombi neMvura Mapombi
Zvimwe Zvakasarudzika Silicone Zvikamu
Mould Dhizaini & Kugadzira
Rubber Zvishandiso Ruzivo Base
Kuyera uye Kuyedza Zvishandiso
Gungano uye Kurongedza Service
Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co, Ltd. iri muDongguan China, ine nzvimbo ye5000 m², bhizinesi rinoitirwa basa rinoenderana neR & D zvigadzirwa zverabha nesilicone zvigadzirwa. Inonyanya kuita mhando dzakasiyana zvigadzirwa zvinosanganisira magetsi zvikamu, zvemagetsi zvikamu, nhare mbozha, mota zvikamu, zvekurapa zvigadzirwa, kicheni midziyo yemagetsi uye zvigadzirwa zvevana, uye mamwe maindasitiri.
Isu tine yakasimba chigadzirwa dhizaini uye chakuumba dhizaini timu, inogona kukurumidza kukudziridza uye dhizaini yemhando yepamusoro mafomu, uye isu tine yedu yega yekushandisa imba uye silicone yekugadzira muchina, inogona kuburitsa zvigadzirwa zvine mhando yepamusoro uye huwandu munguva ipfupi. Tinogona kugadzira chigadzirwa kubva pane imwe pfungwa, uye tinogona kupa masevhisi kubva pachigadzirwa dhizaini, chakuumbwa dhizaini, chigadzirwa chinogadzira, kugungano rechigadzirwa, kurongedza nezvimwe.
Iyo kambani yakanyatso ita kudzora kwekugadzira uye kutonga kweakasiyana maitiro ekugadzira zvinoenderana nezvinodiwa neIO yenyika dzese mhando sisitimu. Iyo kambani ine yakazara manejimendi manejimendi sisitimu kubva pachigadzirwa dhizaini, kutsvagisa uye kusimudzira, kuumba kuvandudza, mbishi zvinhu, kugadzirwa tekinoroji, kuvandudzwa kwehunhu hwekugadzira maitiro, zvakakwana zvivakwa zvemidziyo, kugadzikana kwemhando. Mushure memakore ekuvandudza, zvigadzirwa zvekambani zvinotengeswa allover China. Vagadziri vanozivikanwa vanovimbwa kwazvo, uye vanotumirwa kuUnited States, European Union, Southeast Asia nedzimwe nyika uye vakahwina rumbidzo kubva kune vatengi.
Isu tinobvuma OEM kana ODM, uye nekupa rutsigiro rwehunyanzvi uye seyakavimbika sevhisi, pazasi pane edu makuru kugona.
1. Chigadzirwa dhizaini uye inokurumidza sampuli.
2.Mold dhizaini uye muforoma nhema.
3. Kusarudzwa kwezvinhu uye kusimudzira.
4. Silicone uye rubber compressing kuumbwa uye jekiseni kuumbwa.
5. Chigadzirwa chechigadzirwa.
6. Tsika kurongedza rutsigiro.
Kuvimbika, kusimudzira, hunyanzvi, kutenda.
Yakajairika mashandiro, kutarisisa kwehunyanzvi, hunyanzvi, mhando yekutanga.
Simbisa musika nematarenda, gadzira musika netekinoroji, uye uwine vatengi vane mhando.
Yakakwira Yemhando Zvigadzirwa + Yemakwikwi Mitengo + Inokurumidza Kutendeuka Nguva + Yakakwana Vatengi Sevhisi
Kuve neanotungamira ekugadzira tekinoroji, vakuru vane ruzivo vashandi, vanogona kuve nemabatiro akanaka kwazvo pamutengo wekugadzira.
YEMAHARA HUNHU ZVINOGONESESA
Chinangwa chedu kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kuve nechokwadi chekuti vatengi vedu vanogovana ruzivo rwavo rwakanaka uye vanoshanda nesu. Chaicho chitupa: SGS, FDA, RoHs zviripo.
NGUVA YOKUDZIDZA YOKUDZIDZA
Kugadzirwa kwedu kunogadzirwa, kwakasanganiswa nevashanduki 'vashandi, kwakadzora kugadzirwa kwedu, kuve nechokwadi chekutumira kwakakodzera. Isu tinowedzera yedu yakagadziriswa kupinda mukugadzirwa, zvichirerutsa maitiro ekuodha.
Kuteerera kwakanaka kwevatengi vedu vanozivikanwa pane avo mhinduro uye zvirevo pamwe nemibvunzo kubva kune vatengi vedu vatsva zvakatigonesa kuchinjika zvirinani uye nekuvandudza mhando yebasa. Naizvozvo, tinogona zvirinani kusangana nevatengi vedu 'zvido.
Kugamuchirwa kushanyira fekitori yedu uri munhu, tumira kubvunza kwako kuemail yedu, kana kutifonera chero nguva! Kutenda nekuterera kwako, rutsigiro, kuvimba pamwe nekushandira pamwe.
Kero: Kwete. 428, Changtian Road, Changping Town, Dongguan Guta, Guangdong Province